Twin Digital - Falsafad loogu talagalay kacaanka cusub ee dhijitaalka ah - Geofumadas
Twink Digital - Falsafad loogu talagalay kacaanka cusub ee dhijitaalka ah
Febraayo, 2020 tabo cusub
Kala badh kuwa akhrinaya maqaalkan waxay ku dhasheen farsamada gacmahooda, waxay caadeysteen isbadal dijital ah dhab ahaan. Qeybta kale waxaan nahay kuwa goob joog ka ahaa sida da'da kumbuyuutarka u imaan weyday adoon weydiisan rukhsad; garaaca albaabka oo aan u badalno wixii aan ku sameynay buugaag, warqad ama Terminal kumbuyuutareed hore oo aan si fudud uga jawaabi karin diiwaannada alifbeetada iyo sawirada toosan. Waxa barnaamijka kombuyuutar ee diirada saaraya BIM-da uu hadda sameeyo, oo leh waqti macquul ah, kunaxiran xaalad nololeed, ka jawaab celinta howlaha ku lifaaqan moodeel ganacsi iyo is-weydaarsiga ka shaqeeya taleefannada mobilada, ayaa caddeyn u ah illaa iyo inta ay warshadda soo bandhigtay awood u siiso tarjumaadda Isticmaalaha loo baahan yahay
Erayada qaarkood ee kacaankii dijitaalka ahaa ee hore
Hal-abuurnimo kastaa waxay leedahay la-hawlgalayaal, kuwaas oo ku dhegan moodal u beddelay warshado kala duwan. PC-gu wuxuu ahaa farshaxankii beddelay maaraynta dukumiintiyada jireed, CAD wuxuu u diray miisaska sawiradda meerayaasha iyo kun farshaxan oo aan ku habboonayn khaanadaha, emaylka wuxuu noqday dhexdhexaadka dijitaalka ah ee tooska ah ee si toos ah loogala xiriiro; dhammaantoodna waxay ku dhammaadeen iyagoo raacaya halbeegyo oggolaansho caalami ah; ugu yaraan aragtida bixiyaha. Isbadalladaas kuwii kacaankii hore ee dijitaalka ahaa waxay diirada saareen inay ku daraan qiimaha macluumaadka joqraafi ahaan iyo buugaagta, taas oo kobcisay ganacsiyada maanta si gaar ah. Qaabka ay isbeddelladaasi ku socdaan waxay ahayd isku xirnaan caalami ah; taasi waa, borotokoolka http ee aanan awoodin inaan maanta ka takhalusno. Waxqabadyada cusubi waxay ka faa'iideysteen macluumaadka, xaaladaha isku xirnaanshaha waxayna u rogeen caadooyin dhaqameed cusub oo aan maanta aragno sida Uber, Airbnb, Udemy, Netflix.
Laakiin maanta, waxaan ku jirnaa albaabka kacaan cusub oo dijital ah, kaas oo dhaawici doona waxaas oo dhan.
Qalin xirmayn - 4iR - IoT - Mataanaha Digital - Big data - AI - VR
In kasta oo shuruudaha cusubi ay u muuqdaan inay yihiin kelidood casri ah oo loo yaqaan 'hashtag fashion', haddana ma dafiri karno in kacaankii afaraad ee warshadaha uu albaabada ka taagan yahay, isaga oo si gaar ah uga dhex muuqda astaamo badan. Internetka munaasabadan ayaa balanqaaday inay aad u badan doonto; adigoo ka faa'ideysanaya wax kasta oo illaa iyo hadda lagu guuleysto, laakiin jebinta tusaalayaal aan ahayn suuq aan hadda iskuxiran kombuyuutarrada iyo mobilada kaliya; Wuxuu ku xiraa waxqabadka bini aadamka marka la eego xaaladahooda.
Ma jiro hal oraah oo dammaanad qaadi kara sida seenyada cusub ay u ahaan doonto, in kasta oo codka hoggaamiyeyaasha warshadaha muhiimka ahi ay si xoog leh noo soo jeedinayaan, haddaan qaadanno mawqif mihiim ah iyo ka warqabeynnimo qaan gaadhnimada. Riyooyinka qaarkood, baaxadda iyo fursadaha kacaan cusub, waxay leeyihiin eex ku saleysan kuwa rajeynaya inay maanta iibiyaan. Dowladaha, marka la eego xadka kooban ee hogaamiyayaashooda, badiyaa waxay arkaan waxa ganacsi ama dib u doorashada jagadooda ay matali karto muddada gaaban, laakiin muddada fog waa adeegsadeyaal caam ah oo bilaa macno leh, danaynaya baahiyahooda kuwa ugu dambeeyay. eray.
In kasta oo duruufaha cusubi ballan-qaadayaan xeerar ka wanaagsan wada-noolaanshaha, nambarka xorta ah ee lala nool yahay gaarka loo leeyahay, joogtaynta deegaanka, heerarka ka dhasha is-afgarad; qofna ma dammaanad qaadayo in jilayaasha sida dowladda iyo tacliinta tacliinta ay ku noolaan doonaan kaalintooda waqtiga saxda ah. Maya qofna ma saadaalin karo sida ay noqon doonto; Waxaan ognahay oo kaliya waxa dhici doona.
Mataanaha Digital - TCP / IP cusub?
Oo sida aan ognahay inay u dhici doonto qaab aannaan u arkin isbeddelada qunyar-socodka ah, waxaa lagama maarmaan noqon doonta in loo diyaar garoobo isbadalkan. Waxaan ogsoonahay in munaasabaddan taxaddar iyo isafgarad ay suuragal u noqon doonin kuwa fahmi kara xasaasiga suuqa caalamiga ah ee ku dhex yaal halkaas oo qiimaha lagu daray uusan ka muuqan oo keliya tilmaamayaasha suuqa saamiyada laakiin sidoo kale jawaabta macaamiisha sii kordheysa ee saamaynta ku leh. tayada adeegyada. Shaki la'aan, heerarku waxay ciyaari doonaan kaalintooda ugu wanaagsan si loo hubiyo isu dheellitirka u dhexeeya soo saarista hal abuurnimo ee warshadaha iyo baahida loo qabo isticmaaleyaasha dhamaadka.
Mataanaha dhijitaalka ah waxay rajeyneysaa inay iska dhigto falsafadda isbadalkan cusub ee dhijitaalka ah.
Muxuu damaca cusub ee borotokoolka leeyahay?
Si loo helo http / TCIP si ay u noqoto borotokoolka isgaarsiinta caadiga ah, oo maanta shaqeynaya kahor abuurista teknolojiyadda iyo bulshada, waxay ku qasbanaatay inay soo marto geedi socod maamul, casriyeyn iyo dimoqraadiyad / cadaadis uu adeegsadaha caan ah oo aan la aqoon. Dhinac ahaan, adeegsaduhu waligiis ma yaqaan cinwaanka IP, lagama maarmaan uma ahan in lagu qoro www, mashiinka raadinta wuxuu bedelay baahida loo qabo in lagu qoro http. Si kastaba ha noqotee, inkasta oo su'aasha warshadaha ay ka qabaan xaddidaadda waayeellada ka dambeysa heerarkan, haddana weli waa geesigii jabiyay calaamadaha isgaarsiinta adduunka.
Laakiin borotokoolka cusubi wuxuu dhaafi doonaa isku xirka kombuyutarada iyo taleefannada. Adeegyada daruuriga ah ee hadda jira, halkii la kaydin lahaa bogag iyo xog, ayaa qayb ka ah hawlgalka nolosha muwaadinka ee maalin kasta, dowladaha iyo ganacsiyada. Kaliya waa mid ka mid ah sababaha loo dilo borotokoolka asalka ah, ee ku saleysan cinwaannada IP, maadaama ay hadda lagama maarmaan tahay in la isku xiro farshaxannada ka soo baxa mashiinka dharka lagu maydho ee u baahan in loo diro farriin horey u dhammeystiray wareejinta dharka, una gudbiya dareemayaasha buundada La socodka waqtiga-dhabta ah waa inuu ku wargaliyaa xaaladaada daal iyo u baahan dayactir. Tani waa, qaab aan la aqoon, waxa aan ugu yeedhnay internetka ee waxyaabaha; kaasoo loo baahan yahay inuu borotokool cusub ka jawaabo.
Borotokoolka cusub, haddii uu doonayo inuu noqdo mid caadi ah, waa inuu awood u yeeshaa inuu dhexgalo wax ka badan macluumaadka waqtiga dhabta ah. Baaxadda, waa inay kujirtaa dhammaan jawiga jira iyo kan cusub ee la dhisay, iyo sidoo kale is-dhexgalka jawiga dabiiciga ah iyo adeegga lagu bixiyo dhinacyada bulshada, dhaqaalaha iyo jawiga.
Marka laga yimaado qaabka shirkadda, heerarka cusub waa inuu si dhow ula mid yahay wakiil dijitaal ah oo ku saabsan hantida jirka; sida daabacad, aqal, dhisme, buundo. Laakiin ka badan qaabaynta, waxaa la filayaa inay qiimo ku darto hawlgalada; sidaa darteed waxay u oggolaaneysaa in ay sameyso go'aanno war bixin wanaagsan leh sidaas darteedna natiijooyin wanaagsan.
Marka laga eego aragtida waddan, borotokoolka cusub wuxuu u baahan yahay inuu awood u yeesho inuu abuuro deegaan-ahaaneed noocyo badan oo iskuxiran; sida dhammaan hantida dalka, si loo sii daayo qiime dheeri ah iyadoo la adeegsanayo xogtaas oo loogu talagalay shacabka.
Marka laga yimaado habka wax soo saarka, waxaa lagama maarmaan ah in borotokoolka cusub uu awoodi karo inuu jaangooyo meertada nolosha; loo fududeeyey waxa ku dhaca wax kasta, alaabada sida jid, goob, gaari; immaterials sida maalgashiga suuqa saamiyada, qorshe istaraatiijiyad ah, jaantus gaang ah. Heerka cusub waa inuu fududeeyaa in dhammaantood ku dhashaan, koraan, soo saaraan natiijooyin, oo dhintaan ... ama beddelaan.
Mataanaha dhijitaalka ah waxay rabaan inay noqdaan borotokoolka cusub.
Muxuu muwaadinku ka filanayaa kacaanka cusub ee Digital-ka.
Xaaladaha ugufiican ee sida ay noqon doonto xaaladahan cusub, maaha inaan ka fikirno waxa Hollywoodku noogu dhawaaqayo, ee dadka gudaha Xamar jooga ee ay xukumaan halyeeyo xakameynaya waxqabadka badbaadayaasha adduunka adduun-dhaafka ka dib halkaan oo aan mar dambe suurogal ahayn in la go'aamiyo dhabta jirta. jilitaanka laaluushka keenay; ama dhinaca kale ee ba'an, goob khiyaali ah halkaas oo wax walbaa ay qumman yihiin in shucuurta ganacsigu aadanaha ka luntay.
Laakiin waa in wax laga fikiro mustaqbalka; Ugu yaraan qodobkaan.
Haddii aan ku aragno himiladii labada isticmaale ee waa weyn ee qorshaha hore ee xafiiska, kuwaa oo aan ugu yeeri doonno dhinacyada xiiseynaya. Dhinac xiiseeya oo u baahan in si wanaagsan loo wargeliyo si uu u gaadho go'aanno wanaagsan, iyo muwaadin u baahan adeegyo ka wanaagsan sidii wax soo saar badan loo heli lahaa; Xusuusnow in kooxdan daneyneysa inay noqon karto muwaadin shaqsi ahaan ama koox ka shaqeyneysa dowladeed, gaar ahaaneed ama door isku dhafan.
Marka waxaan uga hadlaynaa adeegyada; Anigu waxaan ahay Golgi Alvarez, waxaanan u baahanahay inaan dhismo u dheereeyo dabaqa saddexaad ee dhismahayga; taas oo aabbahay dhisay 1988. Hadda, aan ilaawin ereyada, astaamaha ama astaamahams ka dhigaya seenyadan mid wasakhaysan oo aan nafteenna ku salayno kuwa fudud.
Juan Medina ayaa ku mashquulsan in codsigan lagu oggolaado waqtiga ugu gaaban, oo ah kan ugu jaban, oo leh daah-furnaanta ugu weyneyd, raad-raaca iyo iyada oo leh qaddarka ugu yar ee shuruudaha iyo dhexdhexaadiyeyaasha.
Hay'addu waxay u baahan tahay inay hesho macluumaad ku filan oo ay ku ansaxiso go'aankan hab aamin ah, sidaa darteed waa la raadraacaa cidda, waxa, goorta iyo halka ay u gudbineyso codsi: maxaa yeelay mar haddii uu oggolaado go'aankan, waa inuu lahaadaa ugu yaraan heerka ugu dambeeya ee isbeddelka la sameeyay , oo leh isla raad raaciddii ay soo bandhigtay. Tani waxay ka jawaabaysaa fikradda ah in «Wadajirka kaabayaasha caqliga leh, qaababka dhismaha ee casriga ah iyo dhaqaalaha dijitaalka ah waxay soo bandhigayaan fursado sii kordhaya oo lagu horumarinayo tayada nolosha muwaadiniinta".
Qiimaha ay xogtu ka qaadaneyso xaaladdan, ayaa ka gudbeysa hal nooc oo aad u faahfaahsan oo dabeecad ahaan loo wada dhan yahay ee dunida jirka; halkii, waxaan ka hadlaynaa in la helo moodooyin iskuxiran iyada oo loo eegayo ujeedada dhexgalayaasha socodka socodka:
Muwaadinku wuxuu u baahan yahay waa jawaab (nidaam),
kaasoo oggolaanaya wuxuu u baahan yahay sharciyeyn (aag goobeyn)
nashqadeeyaha ayaa ka jawaabaya nashqad (Model BIM inuu noqdo),
dhise wuxuu ka jawaabayaa natiijada (qorshe, miisaaniyada, qorshayaasha),
alaab-qeybiyeyaasha ka jawaabaya liiska wax soo gelinta (faahfaahinta),
horjoogaha ka jawaabaya natiijada kama dambaysta ah (BIM sida loo dhisay).
Waxaa iska cad in lahaanshaha moodooyinka iskuxiran ay fududeyn karaan dhaxdhaxaadiyaasha, awood u lahaanshaha otomaatikada ansaxinta in xaaladaha ugu wanaagsan ay yihiin is-adeeg u adeegsiga dhamaadka; ama ugu yaraan, daah furnaan iyo raad raadin, ayaa loo yareeyey tillaabooyinka ugu yar. Ugudambeyn, waxa muwaadinku u baahan yahay waa inuu helo rukhsad iyo dhisid; halka ay dawladdu ku oggolaatay iyada oo raacaysa qawaaniinteeda isla markaana ay hesho macluumaad ku saabsan gobolka ugu dambeeya. Marka, xiriirka ka dhexeeya moodooyinka xafiiska hore gadaashiisa waa sedexdaan qodob, oo qiimahooda ku dara.
Mulkiiluhu wuxuu fuliyay dhismaha uu rajaynayay, Dawladdu waxay dammaanad ka qaadday in shaqada lagu qabtay iyada oo la waafajinayo qawaaniinta iyada oo aan dadaal weyn la gelin dammaanadda si loo ilaaliyo macluumaadkiisa cusboonaysiinta. Kala duwanaanshaha ayaa ujeedku kaliya ku jiraa.
In kasta oo loogu talagalay fuliyaha, naqshadeeyaha iyo keenista alaabada qiimaha lagu daray ayaa ah dhinacyo kale; laakiin si la mid ah xiriirkaas waa in loo fududeeyaa.
Haddii aan ka aragno aragti moodallo ah, dalabkan aan u sameynay dhisme waxaa lagu qiyaasi karaa habraacyo la mid ah: iibinta hantida, deyn guri, codsashada amaahda, rukhsad si ay u shaqeyso ganacsi, uga faa'iideysiga kheyraadka dabiiciga ah, ama cusboonaysiinta. ee qorsheynta magaalada. Kala duwanaanshaha ayaa ku jira dhinacyada sida cabbirka iyo qaababka; laakiin haddii ay lahaan jireen isla nidaamka isku mid ah, waa inay awoodaan inay is dhexgalaan.
Mataanaha dhijitaalka ah, waxay damcaan inay noqdaan moodel u oggolaanaya inay qaabeeyaan oo isku xiraan wakiillo isku dhufanaya, oo leh cabbir baaxad leh oo kala duwan, cabbir ku-meel-gaar ah iyo dariiqooyin.
Maxaan ka filan karnaa Mabaadii'da Gemini.
Tusaalahan hore waa kiis fudud oo lagu dabaqay maaraynta ka dhexeysa muwaadin iyo maamul; laakiin sida lagu arkay baaragaraafyada ugu dambeeya, waxaa lagama maarmaan ah in moodooyinka kala duwan ay is dhexgalaan; haddii kale silsiladda ayaa lagu joojin doonaa isku xirka ugu liita. Si taasi u dhacdo, waxaa lagama maarmaan ah in isbedelka dijitaalka ah lagu daro deegaanka oo dhan oo loo dhisay qaab guud, si adeegsiga wanaagsan, hawlgalka, dayactirka, qorsheynta iyo gaarsiinta hantida qaranka iyo tan maxalliga ah, loo hubiyo nidaamyada iyo adeegyada. Waa inay faa'iido u keentaa bulshada oo dhan, dhaqaalaha, ganacsiga iyo deegaanka.
Hada, tusaalaha ugu wanaagsan ee dhiirigalinta leh waa kii Boqortooyada Midowday. Soo jeedinta Dawladaha Hoose ee Gemini iyo khariidadeeda waddada; laakiin ka hor intaanu u yeedhin asxaabta inay marwalba ka hortagaan towbada iyo dhaqankooda taariikhiga ah ee had iyo jeer raba inay wax walba u qabtaan qaab ka duwan laakiin hab ahaan nidaamsan. Ilaa maantadan la joogo, heerarka Ingiriiska (BS) waxay ku yeesheen saameyn aad u sareysa heerarkii la gaarsiin lahaa caalamka; halkaas oo shaqada waxqabadka hadda socda sida i3P, ICG, DTTG, UK BIM Alliance ay mudan yihiin ixtiraam.
Natiijada ka dhalaneysa gaar ahaan Boqortooyada Midowday, waxaan la yaabanahay waxa ay sameyneyso Kooxda Shaqada Wadajirka ah ee loo yaqaan 'Digital Framework Working Group (DFTG)', oo isu keento codad muhiim ah oo ka socda dowladda, aqoon-yahannada iyo warshadaha si loo gaaro isafgarad ku saabsan qeexidda aasaasiga iyo qiimayaasha. Hanuun ayaa lagama maarmaan u ah kor u qaadida isbedelka dijitaalka ah.
Iyada oo madaxweynaha u xilsaarayo Mark Enzer, DFTG waxay qortay dadaal xiiso leh abuurista Qaab dhismeedka kaas oo siiya maaraynta macluumaadka wax ku oolka ah ee deegaanka la dhisay, oo ay kujirto xog isdhaafsi oo sugan. Shaqadan, ilaa maanta waxay leedahay laba dukumiinti:
Kuwani waa hage loogu talagalay qiimayaasha "wacyi gelinta" qaab dhismeedka maareynta macluumaadka, oo ay ku jiraan 9 mabda 'ah oo loo qaybiyey 3 geesood sida soo socota:
Ujeeddo: Wanaagga guud, abuuridda qiimaha, Himilo.
Aaminaada: Amniga, Furfurnaanta, Tayada.
Hawsha: Xiriirka, Bogsiinta, Isbedelka.
Tani waa qorshe mudnaan leh si loo horumariyo qaab dhismeedka maareynta macluumaadka, oo leh 5 durdurro ah oo maamulaya maamullada Gemini qaab wareejin ah.
Mid kasta oo ka mid ah mawqifyadan hadda jira waxay leeyihiin waddo muhiim ah oo is gaar u leh, oo ay la socdaan hawlo isku soo koobay laakiin waa isku xidhan yihiin; sida lagu muujiyey garaafka. Xilliyada hadda socda:
Gaar, oo leh 8 hawlo xasaasi ah iyo 2 hawlo aan muhiim ahayn. Furaha sida qeexitaankeedu ay lama huraan u tahay dhaqaajinta karti-wadayaasha.
Maamulka, oo leh 5 hawlo muhiim ah iyo 2 hawlo aan muhiim ahayn. Waa kan hadda jira oo aan ku tiirsaneyn.
Caadi ahaan, oo leh 6 muhiim ah iyo 7 hawlo aan muhiim ahayn, ayaa ugu badan.
Fududeyaal, oo leh 4 muhiim ah iyo 6 hawlo aan muhiim ahayn, oo leh is-dhexgal badan oo ku saabsan maaraynta isbedelka.
Beddel, 7 hawlo xasaasi ah iyo 1 aan muhiim ahayn. Waa midka hadda jidkiisa halista ah uu yahay jilaa toosan.
Sidaad ku aqoonsan karto baaxadan, uma maleynaysid kaliya Boqortooyada Midowday inay tahay 'iskaagaaga' Brexit ee isbedelka dijitaalka, ama dhadhankaaga ku-wadista wadada haadka bidix. Haddii aad rabto inaad sare u qaaddo nooca isku xirka mataanaha dhijitaalka ah ee leh heer baaxad leh, waxaa lagama maarmaan ah inaad soo jeediso wax u hagi kara warshadaha, gaar ahaan heerarka. Waxyaabaha soo socdaa waxay u taagan yihiin arrintan:
1.5 Is waafajinta dadaallada kale.
Erayada astaamahaan ayaa inbadan ku filan, in la ixtiraamo sharadkan; Heerarka ISO, heerarka Yurub (CEN), la-socoshada Innovate UK, Dhismaha SMART, W3C, BIM UK, DCMS, i3P, DTTG, IETF.
4.3 Gaaritaan caalami ah.
Halkan waxaan uga hadlaynaa sidii loo garan lahaa loona maareyn lahaa goob loo ololeeyo barnaamijyo, waxqabadyo iyo fursado ka jira xaaladda guud ee caalamiga ah iyo isku xirnaanta. Waxa xiiso leh, inay tixgalin ku yeeshaan barashada dhaqamada wanaagsan ee waddammada horayba isugu dayay; oo ay ku jirto suurtagalnimada isku-darka koox koox aqoon isweydaarsi caalami ah, oo ay ku jiraan Australia, New Zealand, Singapore iyo Canada.
Dukumintiga haweeneyda ah ee la yiraahdo Mabaadi'da 'Gemini', si loo gaaro is-waafajinta muhiimka ah ee hoggaamiyeyaasha wershadaha ugu weyn, waxay noqon doontaa waxa ay ahayd "Cadastre 2014» dhammaadkii 2012-yadii, oo aasaaska u horseeday maareyn dhul, taas oo markii dambe doe. Isfahamka ayaa la shaqeeya dadaallo ay ka mid yihiin INSPIRE, LandXML, ILS iyo OGC, waxay noqdeen illaa iyo 19152 heerka loo yaqaan ISO-XNUMX, oo maanta loo yaqaan LADM.
Xaaladdan oo kale, waxay noqon doontaa wax xiiso leh in la arko sida hoggaamiyeyaasha waaweyn ee warshadaha tikniyoolajiyadda ay u yimaadeen moodallo iyaga u gaar ah ay ku gaadhaan is afgarad; Fikradayda gaar ahaaneed, waxay fure u yihiin:
Kooxda SIEMENS - Bentley - Microsoft - Topcon, taas oo si habeysan ugu sameysay dhacdo dhameystiran oo ku saabsan wareegga Geo-Injineer; qabashada, qaabeynta, qaabeynta, hawlgalka iyo is-dhexgalka.
Kooxda HEXAGON - kaas oo leh dhowr xalal isku mid ah oo leh xiisaha xiisaha leh ee gundhig u ah qaybaha beeraha, hantida, duulista, ilaalinta, difaaca iyo sirdoonka, macdanta, gaadiidka iyo dowladda.
Kooxda Trimble - kaas oo leh mid u dhigma kuwii hore, oo leh faa'iidooyin badan oo mowqifka iyo isbahaysi lala yeelanayo dhinac saddexaad, sida ESRI.
Kooxda AutoDesk - ESRI taas oo dadaal ugu dambeysay raadineyso inaad ku darto boodhadhka suuqyada ay ku badan yihiin.
Sidoo kale jilaayaal kale, kuwaas oo iyagu leh dadaallo u gaar ah, moodallo iyo suuqyo; kuwa loo baahan yahay in la caddeeyo kaqeybgalkooda iyo isafgaradkooda. Tusaale, General Electric, Amazon ama IRS.
Marka, sida aabbahay uu i geeyey fuulista si aan u arko sida ay digaagadu u xakameyso dibi, qalinkeena waa inaan aragnaa waxaan aragno. Laakiin xaqiiqdi waxay noqon doontaa tartan weyn, halka midka kan ka gaadho isku tanaasulku uu ka weynaado, halkaas oo is waafajinta ay ku dareyso qiimo ka badan kan dhibcaha suuqyada saamiyada.
Doorka BIM sida Mataanaha Dijitaalka ah
BIM waxay ku yeelatay saameyn aad u sareysa iyo sii wadis waqti aad u badan, maahan sababta oo ah waxay fududeyneysaa maareynta dhijitaalka ah ee moodooyinka 3D, laakiin maxaa yeelay waa hab ay ku heshiiyeen hoggaamiyeyaasha waaweyn ee dhismaha, injineerinka iyo warshadaha dhismaha.
Mar labaad, dhamaadka adeegsadaha kama warqabo waxyaabo badan oo ka dhaca qolka dambe ee heerarka; isagoo adeegsade ArchiCAD ah oo oran kara inuu horay u sameeyay kahor intaan loogu yeerin BIM; qayb ahaan waa run, laakiin baaxadda habka loo maro heerarka 2 iyo 3 waxay dhaafeysaa maareynta macluumaadka isweydaarsiga, waxayna ujeeddadeedu tahay maareynta hawlgalka iyo wareegga nolosha oo keliya ee aan ahayn kaabayaasha laakiin sidoo kale xaaladda.
Ka dib markaa su’aasha ayaa timid. BIM kuma filna?
Laga yaabee farqiga ugu weyn ee ka imanaya waxa ay Mataanaha Digital Mataan u yihiin in isku xiridda wax walba aysan aheyn oo keliya isku xirnaanta kaabayaasha. Ka fikirida xaaladaha iskuxiran ee dunidu waxay macnaheedu tahay nidaamyo isku xirxiran oo aan lagamamaarmaan u lahayn sameysashada juqraafi. Markaa, waxaan ku jirnaa marxalad cusub oo balaadhinta xaaladda, halkaasoo cidina ka qaadi doonin warqaddii fulisay oo sii wadaysa u hoggaansamida habka BIM, laakiin wax ka sarreeya ayaa nuugi doona ama isku dari doona.
Aynu aragno tusaalooyin:
Markii Chrit Lemenn uu doonayey inuu keeno Core Cadastre Domain Model heerka loo maro maamulka dhulka, wuxuu ku qasbanaaday inuu helo isku dheellitiran tilmaamaha INSPIRE iyo guddiga farsamada ee heerarka juqraafiyeed. Marka, sida ama aan ahayn,
Macnaha guud ee INSPIRE, ISO: 19152 waa heerka loo yaqaan maaraynta cadastral,
Marka loo eego fasalada topographic ee LADM, waa inay u hoggaansamaan heerarka juqraafiyeed ee OGC TC211.
LADM waa heer ku takhasusay macluumaadka dhulka. Sidaa darteed, inkasta oo heerka LandInfra uu ka kooban yahay, haddana waxay jebinaysaa raadinta fudud, maadaama ay doorbideyso inuu lahaado halbeeg kaabayaasha iyo mid dhulka ah, kuna xiraan halka ay isweydaarsiga macluumaadku qiimo ku kordhinayso.
Marka, macnaha guud ee mataanaha Digital, BIM wuu sii wadi karaa inuu noqdo dariiqa xukuma heerarka naqshadeynta kaabayaasha; Heerka 2, Iyada oo leh dhamaan kakanaanta faahfaahinta qaabka iyo baahida dhismaha. Laakiin hawlgalka iyo dhexgalka heerka 3, waxay kuu horseedi doontaa isbeddello si ka fudud sidii qalabixintu u dhacday iyada oo lagu kordhinayo qiimaha oo aan noqon in wax walba lagu wada hadlo luqad keliya.
Wax badan ayaa laga hadli doonaa; qiimaha xogta, jebinta caqabadaha, aqoonta furan, waxqabadka kaabayaasha, abuuritaanka guusha, hawlgalka ...
"Wada-jirka kaabayaasha caqliga leh, qaababka dhismaha ee casriga ah iyo dhaqaalaha dijitaalka ah waxay soo bandhigayaan fursado sii kordhaya oo lagu horumarinayo tayada nolosha muwaadiniinta"
Ayaa u maamula inuu abaabulo jilayaasha muhiimka ah ee ka dambeeya falsafadan, fahamka ahmiyadda wanaagga bulshada, dhaqaalaha, bulshada iyo deegaanka ... waxay yeelan doontaa faa iidooyin waaweyn.
Post Previous«Previous FARO waxay ku soo bandhigi doontaa tikniyoolajiyadeeda 3D ee himiladeed ee geospatial iyo dhismaha Shirka 2020 World Geospatial Forum
Post Next Magaalooyinka Dijitaalka ah - sida aan uga faa'iideysan karno tikniyoolajiyadaha sida waxa SIEMENS bixisoNext »